Therasa May oo diiday in la damiyo saacadda ay caanka ku tahay London - BBC News Somali
Image caption Saacadda Big Ben waxa ay ka mid tahay astaamaha rasmiga ah ee London
Ra'isulwasaaraha dalka Britain Tharesa May ayaa afhayeenka aqalka baarlamaanka dalkaasi John Bercow ka codsatay in dib u eegis lagu sameeyo qorshe hawada looga saarayo saacadda caanka ah ee dhawaaqeeda laga maqlo meelo badan oo London ka mid ah.
Saacadan Big Ben ee ku dhegan qalcadda Elizabeth Tower ayaa hawada laga saarayaa illaa sanadka 2021-da sababo la xiriira dayactir lagu samaynayo qalcadda ay ku taalo.
Daawo: Weerar lagu qaaday masaajid ku yaalla waqooyiga London
"Waxaan rajaynayaa in afhayeenka baarlamaanka iyo guddoomiyaha guddiga joogtada ah ay dib u eegis ku sameeyaan si degdeg ah si ay noogu suurtogasho in dadka ay maqli karaan shanqarta saacadda Big Ben" ayay tiri May.
Qaar ka mid ah xildhibaanada xisbiyada mucaaradka ayaa waraaq u qorey guddoonka baarlamaanka, waxayna ka codsadeen in dib u eegis lagu sameeyo go'aanka lagu aamusiinayo Big Ben oo ah saacad adduunka oo dhan caan ka ah.
Balse BBC Radio 4 oo ah idaacada sida tooska ah u baahisa shanqarta saacadan ayaa sheegtay in ay baahin doonto cod lasii duubey marka la damiyo.
Qarashka lagu dayactirayo saacadda iyo qalcadda ay ku taalo ayaa gaaraya £29m, waxaana la ansixiyey sannadkii 2015-kii.
Bahda warbaahinta Britain iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ayaa aad u dhaleeceeyey go'aanka lagu daminayo saacaddan oo loo aqoonsanyahay in ay ka mid tahay waxyaabaha haybadda u ah dadka Britain.
Waxa ay shaqaynaysay, shanqarteeda la dhagaysanayay muddo dhan 157 sanno
Waxa uu culeeskeeda dhanyahay 13.7 tan, waxayna ku taalaa qalcadda Elizabeth Tower oo dhererkeedu dhanyahay 96m, taasi oo noqotey dhismaha sawirradii ugu badnaa laga qaaday.
Baarlamaanka ayaa sheegey in haddii saacada sii shaqayso ay dhibaato ku tahay dhagaha shaqaalaha dayactirka ka wada dhismaha.
Nin Soomaali ah oo loo xiray dil ka dib weerar ka dhacay bartamaha London